ब्लॉकचेन टेक्नोलोजीकाे परिचय र भविष्य-गौरव चिमरिया - Bhiman Sero Fero
admin ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०१:३८
यदि तपाईं पछिल्ला दस वर्षहरूमा बैंकिंग, लगानी वा क्रिप्टोकरन्सी पछ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने, तपाईं Bitcoin नेटवर्क पछाडि रेकर्ड राख्ने टेक्नोलोजी ‘ब्लॉकचेन’ सँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ। ब्लॉकचेन रेकर्डहरुको एउटा बढ्दो सुची हो जसलाई ब्लक भनिन्छ, जुन क्रिप्टोग्राफि प्रयोग गरेर लिंक गरिएको हुन्छ। प्रत्येक ब्लकमा अघिल्लो ब्लकको एउटा क्रिप्टोग्राफिक ह्यास समावेश हुन्छ। सरल शब्दहरूमा, ब्लकचेनलाई डाटा संरचनाको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ जसले लेनदेनको रेकर्ड राख्छ र सुरक्षा, पारदर्शिता र विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित गर्दछ। जब हामी ब्लकचेनको बारेमा भन्छौं, तब हामी वास्तवमै डिजिटल जानकारी (“ब्लक”) को बारेमा सार्वजनिक डाटाबेस (“चेन”) मा भण्डारण गर्ने कुराको बारेमा भनिरहेका हुन्छौं।
धेरै मानिसहरूमा एउटा सामान्य भ्रम छ कि Bitcoin र ब्लॉकचेन एकै वा एउटै कुरा हो भन्ने, तथापि यो कुरा सत्य होइन। क्रिप्टोकरन्सी सिर्जना गर्नु ब्लॉकचेन टेक्नोलोजीको अनुप्रयोग हो जुन यसै टेक्नोलोजीको आधारमा विकसित हुँदैछन्। ब्लकचेनलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि एउटा उदाहरण विचार गर्नुहोस् जहाँ तपाईं आफ्नो साथी जुन अर्कै स्थानमा वा देशमा छ, उसलाई पैसा पठाउने विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ। एक सामान्य विकल्पको रुपमा बैंक हुन सक्छ वा भुक्तानी ट्रान्सफर अनुप्रयोगहरू हुन सक्छन् जस्तै IME, Prabhu Money Transfer, Western Union Money Transfer आदि। यस विकल्पको रुपमा रहेको लेनदेन प्रक्रिया गर्नको लागि तेस्रो पक्षहरू सामेल छन् जसको कारण तपाईंको पैसाको अतिरिक्त रकम स्थनतरण शुल्कको रुपमा कटौती गरिन्छ। यसबाहेक, यस्तो अवस्थामा तपाईं आफ्नो पैसाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो सम्भावित नै छ कि ह्याकरले नेटवर्कमा अबरोध पार्न सक्छ र तपाईंको पैसा चोरी गर्न सक्छ। यस्तो बेलामा जहाँ ग्राहकलाई समस्या परेको हुन्छ, ब्लॉकचेन अन्धकारमा उज्यालो प्रधान गर्ने प्रकाश झै, उक्त समस्याको समाधान गर्ने एउटा माध्यम हुन सक्छ। पैसा हस्तान्तरण गर्न बैंक वा भुक्तानी स्थानतरण अनुप्रयोगहरुको प्रयोगको सट्टा, यदि हामी ब्लक्चेनको प्रयोग गर्छौ भन्ने प्रक्रिया अझ सजिलो र सुरक्षित हुन्छ। यसमा कुनै अतिरिक्त शुल्क समावेश छैन किनकी कोषहरू तपाईं द्वारा प्रत्यक्ष रुपमा प्रक्रिया गर्नुहुन्छ, जसको फलस्वरूप तेस्रो पक्षहरूको आवश्यकतालाई हटाउन मिल्छ। यसबाहेक, ब्लॉकचेन डाटाबेस विकेन्द्रीकृत हुन्छन् र कुनै एकल स्थानमा सीमित हुँदैनन्। जानकारीहरु एक ठाउँमा भण्डार नगरिएको अवस्थामा, ह्याकरले जानकारीहरु दुरुपयोग गर्ने सम्भावना नुन्न हुन्छन्।
प्राय: सोधिने प्रश्न यो हो कि ब्लकचेनले कसरी काम गर्दछ? के ब्लकचेन प्रयोग गर्न सुरक्षित छ र यदि हो भने कति सुरक्षित छ? ब्लकचेनमा कसरी लेनदेन हुन्छ?
ब्लकचेन नेटवर्कमा प्रत्येक ब्लकले आफ्नो भन्दा अघिल्लो ब्लकको ह्याससँग जानकारी भण्डारण गरेको हुन्छ।
ह्यास एउटा अद्वितीय गणितीय कोड हो जुन एक विशिष्ट ब्लकसँ कोड हो जुन एक विशिष्ट ब्लकसँग सम्बन्धित हुन्छ। यदि ब्लक भित्रको जानकारी परिमार्जन गरिएको छ भने, ब्लकको ह्यास पनि परिमार्जनको अधिनमा हुनेछ। अद्वितीय ह्यास कुञ्जीहरु मार्फत ब्लकहरुको जडान ले नै ब्लकचेनलाई सुरक्षित बनाउँदछ। स्थानान्तरण गर्दा, प्रेसकले आफ्नो निजी कुञ्जी प्रयोग गर्दछ र नेटवर्कमा लेनदेनको जानकारी घोषणा गर्दछ। सूचनाको यो ब्लक (डिजिटल हस्ताक्षर, टाइमस्ट्याम्प) नेटवर्क मार्फत प्रसारण गरिन्छ र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरू हुन्छ। नेटवर्कमा miners हरुले लेनदेनको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि लेनदेन सँग सम्बन्धित गणितको पज्जललाई सुल्झाउनु पर्छ। जसले सुरुमा यस पञ्चललाई सुल्झाउँछं उसलाई Bitcoin को रुपमा पुरस्कृत गरिन्छ। यस्ता गणितीय समस्याहरू लाई proof-of-work भनिन्छ। जब नेटवर्कमा रहेका सम्पूर्ण नोडहरु एउटा साझा समाधानमा सहमत हुन्छन्, तब मात्र लेनदेन हुन्छ र अर्को नयाँ ब्लक त्यो चेन मा जोडिन आउँछ। यो नै ब्लकचेनको सम्पूर्ण कार्यसंयन्त्र हुन जसको प्रयोगले गर्दा हामी एउटा सुरक्षित र विश्वसनीय प्रक्रिया बाट लेनदेन गर्न सकेका छौं। Proof-of-work प्रणालीद्वारा ह्याकरहरुको आक्रमणहरुलाई असम्भव बनाउँदैन, तर यसले तिनीहरूलाई बेकार बनाउँछ(नेटवर्कमा केही गर्न नमिल्ने)। यदि एक ह्याकराले ब्लक्चाइन्मा आक्रमण समन्वय गर्न चाहेमा, उसले ब्लक्चैनको ५०% कम्प्युटिङ पावर लाई कन्ट्रोल गर्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई गर्न असम्भव छ। त्यसैले ब्लक्चैनलाई हामी Hacker-proof भनेर चिन्ने गर्छम्।
यद्यपि Bitcoin र क्र्योटोकरेन्सिज ब्लक्चैन टेक्नोलोजीको पहिलो लोकप्रिय अनुप्रयोग हो, तर तिनीहरू केबल एउटा मात्र होइनन्। ब्लक्चैन टेक्नोलोजीको प्रकृतिले विश्वभरका व्यवसाय, उद्योग र उद्यमीहरुलाई प्रविधिको सम्भाव्यता पत्ता लगाउन र विभिन्न क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू गर्न अग्रसर गरिरहको छ। चाहे त्यो परिचय व्यवस्थापनमा होस् या बैंकिंग प्रयोगमा होस् ब्लक्चैनको माग दिन प्रति दिन बढिरहेको छ। ब्लक्चैनको अन्य सुविधाहरु जस्तै स्मार्ट सम्झौता अनुसार औषधिहको आपूर्तिमा प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सही र व्यवस्थित मतदान प्रक्रियाको लागि निर्वाचनको समयमा ब्लकचेन प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले पारदर्शिता, सुरक्षा र मतदाताहरूको गोपनीयता कायम राख्छ। यति मात्र नभएर, सम्पत्तिको रेकर्ड राख्न वा supply chain को प्रयोगमा होस् ब्लक्चैनका धेरै अन्य अनुप्रयोगहरू छन्।
यी केही उदाहरणहरू बाहेक ब्लक्चैनको क्रान्तिकारी टेक्नोलोजीले विभिन्न उद्योग र कार्य क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रयोगको उच्च सम्भावना देखाएको छ। जबकि केही उद्योगहरुले पहिलेनै आफ्नो व्यवसायमा ब्लक्चैनलाई अपनाउन सुरु गरिसकेका छन्, भने धेरैले अझै सुरु गर्न उत्तम सम्भावित तरिकाहरुको अन्वेषण गरिरहेका छन्। ब्लक्चैन, टेक्नोलोजी जगतमा एउटा नयाँ नाम हो तर यो पक्कै पनि अन्तिम होइन। प्रारम्भिक चरणमा राखेको यो टेक्नोलोजीले आफ्नो पहिलो प्रयोगबाट धेरै लोकप्रियता हासिल गरिसकेको छ। प्रत्येक बितेको दिनका साथै यस टेक्नोलोजीको आरु अनुप्रयोगहरू पत्ता लागिरहेको छ। एक पटक यस टेक्नोलोजी लाई स्वीकार गरी पत्ता लागिरहेको छ। एक पटक यस टेक्नोलोजी लाई स्वीकार गरी यसलाई एक ग्लोबल स्तर प्रधान गरियो भने यसले हाम्रो जीवन शैलीमा धेरै परिवर्तन ल्याउने छ।